Yakanakisa TV akateedzana ema90s | Ndipei zororo
Shamwari ndeimwe yeakakurumbira akateedzana ema 90s
Kana iwe uri chikamu chezera remireniyamu, une chokwadi chikuru kushuva kwema 90's. Pakange pasina WhatsApp, Facetime uye tisingataure nezveNetflix uye mamwe mafuratifomu. Nekudaro, kana iwe wakakura panguva iyoyo, iwe wakanyatsoteerera kumimhanzi yeSpice Vasikana uye neRekisheni Vakomana; Iwe wakacherechedzawo mafashoni ane mavara mune zvishongo, zvipfeko, uye zvishongedzo zvebvudzi. Emojis akaita yavo diki kutaridzika kekutanga! Izvo zvaive zvine fashoni chaizvo kuverenga magazini uye kumirira vhiki yega yega chitsauko chitsva cheyaunofarira show. Imhaka yeizvozvo Muchikamu chino tinopa rukudzo kune akanakisa akateedzana terevhizheni ema90.
Nese tekinoroji yatinayo nhasi, tinogona kuvaona zvakare pane chero chikuva.Kurangarira kuri kurarama zvakare! Nakidzwa nekufamba uku munguva!
1 Muchinda weBel Air
4 Sabrina, zvinhu zvevaroyi
5 Buffy iyo Vampire Slayer
6 Kunzwa Kwekurarama (90210)
7 Mr Bhinzi
8 Iyo Baywatch
9 Zvinhu zvevanin'ina
10 Wese munhu anoda Raymond
11 Imba yakakwenenzverwa
12 Faira X
Muchinda weBel Air
Iyo American nhepfenyuro yakaburitswa kubva muna1990 kusvika 1996; Mwaka mitanhatu yakaburitswa nezvizere zana nezvisere nezvikamu. Iye protagonist ndiWill Smith, anga aine makore makumi maviri nemaviri panguva iyoyo. Iyo nzvimbo inotarisana ne Mukomana anobva kuPhiladelphia uyo anotumirwa kunogara nehama dzakapfuma pakukumbirwa naamai vake.
Iye protagonist jaya risina hanya, aigara kurarama akasununguka, "achibvarura" uye achitamba basketball munguva yake yekusarudzika. Paanoenda kuBel Air pamwe nasekuru vake vane simba, anogara nevanun'una vake vana vane tsika, vaanochinja hupenyu hwake nekusiyana netsika dzakasiyana. Panguva iyoyo, yaive imwe yemitambo ine vateereri vepamusoro uye yakaratidza kuvhurwa kwebasa rakakura raWill Smith.
Mutambo weAmerica wakanangana nezviitiko zve mamiriro ekukurumidzira ekurapa. Inotaurira hupenyu uye hwega nehunyanzvi timu yechipatara chekunyepedzera chiri muguta reChicago uye inogamuchira varwere vane zviitiko zvisina kujairika zvavanoda kugadzirisa nekukurumidza kuponesa hupenyu hwevarwere vavo. George Clooney aive chikamu cheboka revatungamiriri vanachiremba!
Mwaka gumi nemashanu wakagadzirwa pamwe nezvikamu makumi matatu nematatu nemapfumbamwe zvakapera muna15 uye zvakatanga muna331.
Yakave yakasimbiswa seimwe yeakateedzana eiyo genre ine yakawanda mibairo.
Komedi akateedzana akamhanya kwemakore gumi nemwaka gumi. Inoonekwa seimwe yeanobudirira kwazvo nguva dzese! Hupenyu hwezuva nezuva hwevatanhatu shamwari dzepamwoyo hunorondedzerwa: Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Ross naJoey. Ivo vanogara muNew York City uye vanogovana hukama hwepedyo kwazvo hwehukama chaihwo hunobva rudo. Vanorarama mhando dzese dzemamiriro ezvinhu dzinoitika kune vanhuwo zvavo: nyaya dzerudo, kusuwa kwemoyo, matambudziko ekushanda, mamiriro akaomarara emhuri uye nzendo dzinonakidza, kutumidza mashoma mienzaniso. Ivo vese vanogara padhuze nepadhuze nepadhuze saka vese vanosangana munzvimbo yekudyira nguva zhinji.
Iwo akateedzana ane kubata kukuru kwekuseka, kunyanya naJoey naFebe seumwe wevanonyanya kuseka vatambi vanowana zvinopfuura kuseka.
Iyi nhepfenyuro yakaratidza mabasa evose protagonists, vakaenderera mberi nebasa ravo pachiratidziro hombe uye icho, kazhinji, chinoramba chichiita basa.
Sabrina, zvinhu zvevaroyi
Achitaura nevatambi vemitambo venguva, Melissa Joan Hart anotamba Sabrina Spellman a Mudzidzi wemudzidzi anowana pa16 kuti ane masimba emashiripiti. Anogara natete vake vaviri, Hilda naZelda avo vagara kwemakore anodarika mazana matanhatu uye varoyi zvakare. Ivo vane Salem sechipfuwo, katsi inotaura uye vane hushamwari mune akateedzana. Iyo showa yakatangwa muna 600 uye chikamu chayo chekupedzisira chakaburitswa muna 1996.
Sabrina anoenda kuchikoro chegadziriro semusikana akajairwa uye zano rinotaura maanosimudzira hupenyu hwake kuti ave muroyi nyanzvi uye munhu mukuru ane mabasa munyika chaiye kwaanoda kuchengetedza masimba ake parutivi. Vamwe vanodakara maratidziro anopetenuka panguva yekoreji uye kupera kwenyaya dzinotaura nezvemuchato we protagonist.
Kazhinji, chikamu chega chega chinotaurira imwe nyaya isina hukama chaihwo nechakaitika chikamu uye chimwe nechimwe chazvo chine mhando yetsika. Izvo zvaive pasina mubvunzo imwe yeanonakidza kwazvo akateedzana kutarisa kune vechidiki venguva iyoyo!
Buffy iyo Vampire Slayer
Yakanga iri pamhepo kwemakore matanhatu (1997-2003) nemwaka minomwe. Iyo protagonist Buffy Summers, inoridzwa naSarah Michelle Gellar. Iye ari mudiki vampire muurayi anoedza kurarama hupenyu hwake munzira "yakajairika" inogoneka. Munharaunda yese, iye anogamuchira ramangwana rake uye nerubatsiro rwemurindiri, anova murwi asingaregi kurwisa masimba erima.
Pakati pechitsauko chimwe nechimwe unofanirwa kurwisa huwandu hwakawanda hwevampire nemadhimoni anorwisa vanhu.
Vamwe vane madingindira akafanana vanobuda mune dzino nhevedzano, ndizvo zvakaita Mutumwa.
Kunzwa Kwekurarama (90210)
Nhepfenyuro yakafambiswa kwemakore gumi (10 kusvika 1990) uye yakatanga kutepfenyurwa paFOX muUnited States, yakazove budiriro yepasi rese. Iyo sipo opera nhevedzano ndeye iyo vrunyararo rwendo rweboka revadzidzi vechikoro chesekondari muguta reBeverly Hills. Mwaka wekutanga wakanangana nehupenyu hwehama dzaWalsh, gare gare madingindira akave akawedzera kuwanda mumatopu ehudiki.
Brandon, Brenda, Kelly, Steve, Donna naNat ndivo vamwe vevanopokana pakuratidzira kunopokana.
Ndicho Makomendi akateedzana achitarisa mutambi ane zita reti akateedzana. Iye anobva kuBritain uye zvitsauko zvacho zvaive nemarongero akasiyana, hunhu hwakawanda hwemaitiro aVaBean hwaive hwakanangana nekutaurirana nemasaini kazhinji.
Izvo zvinoitika, hunhu uye nzira yekugadzirisa matambudziko e protagonist anoumba yakasarudzika show iyo inonakidza kwazvo kuona!
Yakamhanya kwemakore mashanu: kubva 1990 kusvika 1995 uye gare gare maviri mafirimu akaburitswa muna 1997 na2007.
Zvirokwazvo imwe yeakanyanya-akapihwa akateedzana makore gumi! Zuva, jecha, gungwa uye statuesque vaponesi pamhenderekedzo ndivo vakanyanya kukwezva kwemakore gumi. Chikamu chimwe nechimwe chaive nezviitiko zvakasiyana uye izvo zvaisanganisira vanhu kuponesa mumamiriro ezvinhu akaomarara.
Iwo akateedzana akamhanya kwegumi nerimwe mwaka uye akapera muna 2001.
Nyeredzi dzakafanana mapatya Tia naTamera Mowry, zano rinotaura nyaya ye mapatya maviri akaparadzaniswa pakuzvarwa. Vaviri vakagamuchirwa nevabereki vakasiyana uye vanosangana zvakare kana vaine makore gumi nemana ekuberekwa. Mushure mekubatanidzwazve kusingatarisirwi, ivo vanoita gadziriro dzekugara pamwe chete uye pakupedzisira kusangana. Ivo vaviri vane hunhu hwakasiyana kwazvo, izvo zvinoita kuti yega yega episode ive inonakidza kwazvo.
Kugarisana pakati pevabereki vekurera kunoshamisawo.
Iyo showa yakaburitswa kubva 1994 kusvika 1999.
Wese munhu anoda Raymond
Iyo nzvimbo inotarisana ne Mhuri yeItari -America ine vabereki nevana vatatu. Vabereki vaRaymond, baba vemhuri, vanogara mhiri kwemugwagwa. Saka ivo vanowanzo kuve kushanya kunogaro uye dzimwe nguva kunogumbura kunounza huwandu hwakawanda hwesetsa mamiriro.
Kazhinji, musoro wenyaya ndewe hukama hwehukama nemakakatanwa akagadzirwa pakati pezvizvarwa zvakasiyana zvevanhu vachipfuura nhanho dzakasiyana dzehupenyu.
Iyo ndeimwe yeakakomborerwa kwazvo akateedzana emakore gumi uye rimwe rakasimudzira zvakanyanya basa raTim Allen.
Iyo showa inorondedzera hupenyu hwe muterevhizheni anotungamira ane dingindira rekudzidzisa mashandisiro ekushandisa maturusi akafanira saka vatariri vanogona kugadzirisa pamba pavo vega. Panguva imwecheteyo, protagonist inofanirwa kubata nemukadzi anodzvinyirira uye nevana vatatu vanogadzira mamiriro anosetsa.
Iyo sainzi fungidziro yechakavanzika nhevedzano ndeye iyo nyika yepasirese yepasi uye zvisikwa zvisingazivikanwe. Pakati penyaya idzi, mafaira akavanzika akagadzirwa akaongororwa vaviri FBI vamiririri: Mulder uye Scully. Yakazara kusahadzika, yega yega episode yakarondedzera dzakasiyana zvakavanzika kesi izvo zvakakonzera kusagadzikana kukuru pakati pevaoni.
Yakanga iri pamhepo kwemakore mapfumbamwe nemakumi matanhatu neshanu mibairo yakapihwa nemasangano akasiyana anosanganisira maEmmy Awards uye neGolden Globes. Magazini yeTime yaisanganisira "The X Files" mune chinzvimbo chezana rakanakisa akateedzana munhoroondo.
Iyo yakatanga mu1993 uye ikabereka mwaka gumi nemana wakapera muna 11. Dr. Frasier murapi akabudirira kwazvo aine redhiyo muSeattle. Anogovana mazano ake akanakisa uye nzwisiso nevateereri vake, zvakadaro anofanirwa kubata nenyaya muhupenyu hwake zvakare.
Iye mukurumbira wepfungwa anorambana uye anopedzisira achigara nababa vake uye imbwa inonzi Eddie. Hama yavo yakaoma inovashanyira nguva dzose.
Iyo Café Nervosa yekudyira ndiyo imwe yenzvimbo dzinonyanya kushanyirwa nevaratidziri uye chiitiko cheakawanda ezviitiko.
Fran Fine, protagonist, mukadzi anobva kuzvizvarwa zvechiJuda anotengesa zvipoda pasuo nesuo muNew York City. Netsaona ndeye cAkazvarwa kuve muchengeti wevatatu vakomana vepamusoro-soro vakomana vemurume akanaka murume akafirwa anonzi Maxwell Sheffield, anova zvakare mugadziri weBroadway.
Chikamu chega chega chinoratidzira akateedzana matanguru ayo Fran anoda kugadzirisa nekutsigirwa neshamwari yake, Butler Niles. Amai vaamai nanambuya ndevamwe vevanonyanya kuseka mune akateedzana.
Iyo showa yakamhanya kwemakore matanhatu uye yakaburitsa firimu makore makore apera.
Ndinovimba nguva ino kufamba kwainakidza! Iwe unongoda kutsvaga mapuratifomu akakodzera kuti unakirwe zvakare izvo zvaunofunga zvakanakisa nhepfenyuro yeterevhizheni yemakumi mapfumbamwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndipei zororo » General » Yakanakisa TV akateedzana ema90